12 लागि परिणाम frozen games
स्थिर राजकुमारी वास्तविक दन्त चिकित्सक
राजकुमारी अन्ना एउटा ठूलो दाँतको दुखाइको छ र तपाईं एक दन्त उपचार त्यो उनको दाँत मा छ कि सबै क्षय हटाउने जहाँ प्रदर्शन गर्न दन्त चिकित्सक उनको लिनु आवश्यक छ। सही प्रक्रियाहरु पालना र एक सुन्दर र स्वस्थ राजकुमारी छोड्न
स्थिर Halloween अनुहार कला
राजकुमारी अन्ना को हेलोवीन पार्टी लागि मेकअप गर्न आवश्यक छ। विभिन्न विकल्प र कल्पना मेकअप संग hauntingly सुन्दर राजकुमारी गरौं।
अन्ना र ELSA Halloween
यो ELSA र अन्ना princesses Arendelle मा हुनेछ भनी ठूलो हेलोवीन पार्टी लागि उत्पादन गर्न आवश्यक छ। रचनात्मकता दुरुपयोग र hauntingly सुन्दर princesses छोड्न सही नजर पाउँछौं।
राजकुमारी स्थिर हैलोवीन पार्टी बना
यो ELSA र अन्ना princesses सँगै हेलोवीन को दिन मनाउन र तपाईंले यो डरलाग्दो दिनको लागि सही लुगा पोशाक मदत गर्न आवश्यक छ। को hauntingly सुन्दर princesses गरौं गर्न कल्पना र सबै सौन्दर्य वस्तुहरू चयन गर्नुहोस्। प्ले मजा फा
बरफ राज्य दराज सफाई
यो ELSA र अन्ना princesses आफ्नो वार्डरोब व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्न आवश्यक छ। त्यसपछि मात्र तपाईं सबै कुरा सफा र संगठित छोड्न सक्षम हुनेछ किनभने अलग, सबै लुगा र नयाँ जूता र मात्र नयाँ भागहरु छोडेर पुरानो सेट गर्नुहोस्।
राजकुमारी स्कूटर सवारी
यो ELSA र अन्ना बहिनीहरू राज्यको एक सानो सारा परिदृश्य को परिदृश्य रमाइलो गर्न सक्षम हुन लागि बाइक सवारी चाहनुहुन्छ, तर तिनीहरूले लुगाहरू, Hairstyles र सौन्दर्य सामान सुपर फैशन गरौं भनेर मा पोशाक गर्न आवश्यक छ।
ELSA स्पा उपचार
Elsa.You संग स्पा मा एक आराम दिन आनन्द लिनुहोस् उनको अनुहार र शरीर मास्क, र धेरै अन्य उपचार लागू गरेर सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, अन्त मा त्यो wonderful.After दिखेगा त्यो तिमी उनको एक मेकअप दिन र उनको हेर्न बनाउन सक्छ स्पा उपचार आनन्द उठाए wonderful.Have फू
स्थिर: अन्ना साहसिक भाग 1
अन्ना ELSA उद्धार गर्न र उनको घर ल्याउन चाहन्छ, तर त्यसो गर्न, त्यो केही चुनौतीहरू पूरा गर्न छ। अन्ना अन्तरक्रिया र वन मा बाटो फेला पार्न तीर कुञ्जीहरू प्रयोग गर्नुहोस्। त्यो गर्न तीन रोक्दछ छ। पहिलो स्तर मा, तपाईं hel हुनेछ
स्थिर डबल समस्या
अन्ना र Kristoff अवरोध मार्फत आफ्नो बाटो नेभिगेट द्वारा ELSA फेला पार्न मद्दत, वस्तुहरू भेला, र रेखा गर्न पाइरहेको। यो मंच खेल पक्कै तपाईं एक खेल मा खोज्दै हुनुहुन्छ रमाइलो र साहसिक ल्याउन बाहिर थियो।
यो प्यारी सानो भौतिकी कौशल खेल मा लक्ष्य मंच गर्न 'जम्पिङ बक्स' प्राप्त गर्नुहोस्। टूट पडना गर्न माउस प्रयोग र खराब बक्से छोएर र झर्ने तल जोगिन
Spongebob स्मृति मिलान
तिनीहरूलाई क्लिक गरेर कार्ड को जोडी मिल्ने पत्ता लगाउनुहोस्। प्रत्येक खेलमा लागि तपाईं 100 अंक प्राप्त। अर्को स्तर जाने समय अवधि भित्र कार्ड को सबै जोडी मेल खाँदैन।
यो सेना मा प्रशिक्षण अवधि छ, तपाईं एक प्रशिक्षार्थी रूपमा सेना छन् भनेर मान। तपाईंले तिनीहरूलाई भन्दा बम गिर गरेर सम्पूर्ण भवन विस्फोट छ। जबकि हेलिकप्टर हरेक राउन्ड पछि आफ्नो उडान ऊंचाई घट्छ सावधान रहनुहोस्। यो अग्लो विस्फोट
alandria लागि लडाई
खेल 13 मिशन समावेश। प्रत्येक मिशन दौर को धेरै दसौं हुन्छन्। प्रत्येक राउन्ड दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। तपाईं, निर्माण र खेल को पहिलो भाग समयमा आफ्नो सेना अपग्रेड किन्न। खेलको दोस्रो भाग युद्धमा, जो तपाईं गर्न सक्छन् मा
सबैभन्दा पागल स्नोबोर्ड फ्लैश खेल कहिल्यै गरे! तपाईं सिक्का कमाउन र आफ्नो गियर अपग्रेड गर्दा विशाल एयर प्राप्त र5पागल स्टन्ट गर्न,!
गंगनम शैली केटी माथि पोशाक
गंगनम स्टाइल ड्रेस अप केटी। तपाईं गंगनम शैली कसरी नृत्य गर्न थाह छ? नृत्य को यो शैली अब विश्वव्यापी छ र तिनीहरूले प्रसिद्ध संगीत सुन्दा सबैलाई कि शैली नृत्य। राम्रो गंगनम शैली यो केटी ड्रेस।
avengers पद गामा राक्षस
यो Helicarrier एक गामा राक्षस आक्रमण गरेर आक्रमण हो। उतेजना को Avengers जहाज जोगाउन भेला गर्न आवश्यक छ।
राम्रो ग्राफिक्स र आनन्द गेमप्ले नयाँ सुन्दर मोटरबाइक खेल। गिर छैन र आफ्नो पाङ्ग्रा गुमाउनु छैन गर्न प्रयास गर्नुहोस्!